WOWOW Spring Commercial Black Ikhishi ompompi nge Pre-Rinse Sprayer
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Khipha ompompi basekhishini / WOWOW Spring Commercial Black Kitchen ompompi nge Pre-Rinse Sprayer
Umklamo Osebenzayo - I-arch ephezulu ye-360 ° swivel ompompi inikeza isikhala esanele sanoma yimuphi umsebenzi wasekhishini - ukuhlanza, ukugcwalisa, njll. Ingalo yokuhlanganisa kazibuthe ukugcina ikhanda lesifutho lizinzile futhi livimbele ukuthi lingawi. Idizayini engu-90 ° eguquguqukayo yokubamba eyodwa kulula ukulawula ukushisa kwamanzi nokugeleza kwevolumu ngasikhathi sinye.
Kulula ukufaka - 1 noma 3 imbobo ukufakwa. Sikunikeza imiyalo eningiliziwe, izesekeli zokufaka namathuluzi, kufaka phakathi ipuleti lesembozo, u-0.5m tucai hose water in quality assurance, gloves nokunye. Ukufakwa okulula wedwa ngaphandle kweplamba.
2 Izindlela Zamanzi - Ikhanda le-Pre-Rinse Sprayer linikeza isifutho esinamandla esisebenza ngamandla ukucisha izinsalela zokudla, ingahlala ivulekile ngomshini owodwa wesibambo futhi asikho isidingo sokuyibamba. Imodi yokusakaza yokugcwalisa amabhodwe amakhulu namapani ngemizuzu. Zingasebenza ngasikhathi sinye futhi zijikeleziswe zizungeze ama-360 ° okwenza ukupheka kusebenze kahle.
Solid Brass Ukwakhiwa - Umpompi wokugcwalisa imbiza osindayo wenziwe ngethusi eliqinile le-premium futhi unesisindo esingu-9.7 Ibs. I-Brass ekhishini lompompi wokugoba onomphetho omnyama we-matte ukugqwala, ukugqwala, ukumelana nokuvuza, futhi kuqinisekisa ukuphepha kwamanzi nempilo ende.
Insizakalo yekhasimende - Kumbozwe ukubuyiselwa kwamahhala kwezinsuku ezingama-90 newaranti yeminyaka emihlanu. Uma ungeneme nganoma yimiphi imibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
SKU: 2312000B Categories: Ikhishi Faucets, Khipha ompompi basekhishini Tags: commercial, Isifutho sangaphambi kokugeza
Amasentimitha angu-33.1 x 13.6 x 2.8
Isiqinisekiso seminyaka emi-5